Hoyga ceelhuur - ceelhuur Skip to navigation
Hoyga ceelhuur - ceelhuur
Su&apos;aal Isweydiin Mudan * Hadad ogtahay walaal inay noloshadii ka hartay hal maalin ee maanta tahay maalintii ugu dambaysay noloshaada maxaad samyn laheyd walaal? Ma waxad ku dhamayn lahayd malinkaas salaad iyo ooyin iyo dambi dhaaf aad allah ka waydiisanayso saladihii kaa tagay? Mise waxad booqan lahayd ama wici lahayd qarabadii aad goysay adigoo ugu marmarsiyoonaya inaad mashquul ku ahayd noloshada iyo mise waxad wada tuuri lahayd ood fogayn lahayd CDyada iyo cajaladaha heesaha ee aad ka buuxisay sanduuqyadaada, mise waxad iska xidhi lahayd saterlateka TVga oowaxad usoo jeesayn lahayd inaad akhriso ood dhagaysato Qur&apos;aankii aad iloowday noloshadii oodhan? Misa waxaad raali galin lahayd waalidka aad ku caasisay? Ma wici lahayd qofkasta ood gadashiisa wax ka sheegtay ama aad xumaysay mane u waydiin lahyd dambi dhaaf si alah kuugu dambi dhaafo adiga? Wuxuu yidhi Allaah kr ahaaye:
Ilaa markii ay dhimashadu u timaaddo midkood(danbiilaha) wuxuu
yidhaahdaa Rabiyow dib ii celi si aan u falo wanaag wixii aan uga soo
tagey gadaal, MAY wax kale maahee waa kalmad uu iska yidhi,
gadaashoodna waa barsakh(xijaab) Ilaa maalinta la soo bixin doon
Walaal maad samysid camalkasta oo wanagsan maanta sidii iyadoo maanta ay tahay maalinkii u dambaysay noloshada. Allaah kor ahaye wuxuu yiri : Waxaad dhahda Nabiyow addoomadayda ku xadgudbay naftoodow Ha ka Quusanina Naxariista Eebe , Eeba dhaafa Danbiyada dhamaantoode,waana dambi dhaaf badane naxariis badane (suurat alzumar,53) Walaal, haka caajisin inaad walaaladaada kale u sii gudbiso, Allaah
ayaad ajar kaga heli doontaaye.
( Qofkii qof kale khayr tusaa ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay). ..Qore: Mahamed mahamed_ahmed82@hotmail.com Tafatiraha webka ceelhuur: